बुढीआमाको डिजिटल फड्को - जीवनशैली - कान्तिपुर समाचार
लक्ष्मी भुसालले एकैखाले ढाँचामा रेडियोमा बोलेको ५१ वर्ष बितेको छ, जुन रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिमान हो।
झिसमिसे साँझपख टुप्लुक्क आँगनमा आइपुग्ने जेटीएलाई भुटेको मकै–भटमास खुवाउँदै करेसाबारी, पशुपालन आदिबारे गन्थन गर्ने बुढीआमालाई सुनेर नहुर्किने सायदै होलान्।
यिनै बुढीआमा र जेटीएको संवादमार्फत परम्परागत कृषिलाई ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा स्थापित ‘कृषि सूचना शाखा’ले ५२ वर्ष पुरा गरेको छ। हाल कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र भनिने यो संस्थाले असार अन्तिम साता (दुई वर्ष ढिलो) स्वर्ण जयन्ती मनायो।
अधिकांश नेपाली किसानले यो रेडियो कार्यक्रम स्थापना गर्ने सरकारी निकायलाई भन्दा कृषि कार्यक्रमकी बुढीआमालाई चिन्छन्। बुढीआमा अर्थात् लक्ष्मी भुसालले स्वर दिन थालेकै ५१ वर्ष बितिसकेको छ। उनको स्वरले पनि स्वर्ण युग पुरा गरेर कीर्तिमान कायम गरेको छ। नेपालमा यति लामो समयसम्म चलेको यो नै पहिलो रेडियो कार्यक्रम हो। केन्द्रका प्रसारक अधिकृत श्रीराम पुडासैनी ‘यति लामो समय एउटै पात्रले एकैखाले ढाँचामा रेडियो कार्यक्रम चलाएको यो नेपालमा मात्र नभई विश्वमै पहिलो’ भएको दाबी गर्छन्।
हुन पनि नाटकीय ढाँचामा २०२३ मंसिरदेखि सञ्चालित ‘जेटीए र बुढीआमा’ आजसम्म निरन्तर र लोकप्रिय छ। ‘राजा महेन्द्रको जुग थियो। पछि वीरेन्द्र आए। अहिले राष्ट्रपतिको जुग चलेको छ। कति कृषिमन्त्री फेरिए/फेरिए,’ बुढीआमाले भनिन्, ‘मेरै कार्यक्रम चलाउने कार्यालयमा म अठारौं हाकिमसँग काम गरिरहेकी छु।’ ४४ रुपैयाँ मासिक तलबमा सहायक तहबाट छिरेकी बुढीआमाले उमेर हदका कारण उपसचिवबाट अवकाश लिइसकेकी छन्। हाल उनलाई आवाज विशेषज्ञका रूपमा केन्द्रले करारमा राखेको छ। उपसचिव हुँदा २५ हजार हाराहारी तलब स्केलबाट अवकाश पाएकी बुढीआमा अहिले मासिक ९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिई बुढीआमाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन्।
बाजे–बराजु अर्घाखाँचीबाट आएको सुनेकी यी बुढीआमाको जन्मथलो काठमाडौंको डिल्लीबजार हो। तर अहिले उनी जोरपाटी नयाँबस्तीकी बासिन्दा हुन्। १४ वर्षको उमेरमा रेडियोमा छिरेकी भुसालले दरबार हाइस्कुलबाट टेस्ट पास गरिन्। रेडियोमा जागिर खानुअघि डिल्लीबजार आसपासमा अर्काको खेतमा रोपाइँ गरेका सम्झनाहरू उनको स्मृतिमा धुमिल छन्।
किसानमाझ मात्र नभई अन्य श्रोतामा पनि बुढीआमाको ‘फ्यानडम क्रेज’ अत्यधिक छ। साँझ ७ बजेको मुख्य समाचारअघि १५ मिनेटमात्रै सुनिएर, अर्काे शुक्रबारसम्म अलप हुने वाचा गर्दै बिट मार्ने बेला भन्ने ‘हरिशरणम्’ थेगो यिनलाई चिनाउने अर्को पर्यायवाची नाम जो छँदैछ। रेडियोमा जोडिएपछि उनले १ वर्ष जर्मनमा ग्रामीण ब्रोडकास्टिङको तालिम लिने मौका पाइन्। सरकारी खर्चमै मलेसिया पुगेर पनि एक महिने तालिम लिइन्। बाटामा हिँड्दा अहिले पनि कतिपयले प्वाक्क सोधिदिन्छन्, ‘बुढीआमा अहिले कुन बाली लगाउने बेला हो?’ अहिले उमेरले नै बुढी बनेकी उनी झर्को नमानी उत्तर बताइदिन्छिन्।
टाइपिस्टको जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिन सिंहदरबार जाँदै गरेकी एक चिनारु महिलासँग ‘साथी बनिदिएर’ २०२३ साल भदौमा सिंहदरबारस्थित कृषि विभाग नपसेको भए सायद भुसालको आज बुढीआमाका रूपमा यस्तो परिचय हुने थिएन।
त्यही बेला उनको विभागभित्र रहेको ‘कृषि सूचना शाखा’का तत्कालीन हाकिम किरणमणि दीक्षितसँग भेट भयो। ललाटमै लेखेर ल्याएको भन्दा ’नि हुन्छ। रेडियो कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका दीक्षितले उनलाई जागिरको अफर गरे। अंग्रेजीमा टाइप गर्न जान्ने सर्तसहितको अफरलाई भुसालले हुन्छ भनिदिइन्। तर खासमा उनलाई टाइप आउँदैनथ्यो रे। त्यसै वर्षको मंसिर २५ गतेदेखि भुसाल बुढीआमाको स्वरमार्फत रेडियोबाट देशभर सुनिन थालिन्। उनीसँगै त्यसबेला सुनिनेमा सूर्यबहादुर श्रेष्ठ र मोहनकुमार श्रेष्ठ पनि थिए। जो रेडियो यात्रामा बीचमै अवकाश प्राप्त भए। २०३४ सालतिर मदनकृष्ण श्रेष्ठ, मदनदास श्रेष्ठ पनि बुढीआमासँगै रेडियो कार्यक्रमसँग जोडिएका थिए। उनीहरू १० वर्षको अन्तरालपछि ‘निस्किएका’ थिए। अहिले उनीसँग जेटीएको स्वरमार्फत नाट्य अभिनयमा साथ दिनेमा उनलाई सुनेर हुर्केका देवराज गौली, श्रीराम पुडासैनी, मदन सुवेदी, विनोद गिरी लगायत छन्। उनको कार्यालयका प्रमुख सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेल पनि उनलाई सुनेर हुर्केका युवा हुन्।
ऊ बेला रेडियो नेपालको एकाधिकार र जगजगी थियो। रेडियो सेट हुने किसानहरू बारीका कान्ला, गोठ, आँगन, दलिनमा रेडियो राखेर बुढीआमालाई सुन्दै कृषिकर्म गर्थे। कार्यक्रम चर्चित थियो। त्यसताका यो कार्यक्रम बिहान पनि बज्थ्यो। एक पटकको कुरा हो। मुग्लिन आसपासको फिल्ड यात्रामा थिइन्, बुढीआमा। एक किसान कृषि कार्यक्रम सुन्दै भुइँकटहर रोप्दै रहेछन्। संयोगले भुइँकटहर रोप्ने दृश्यका साक्षी हुनपुगेका कृषि कार्यक्रम निर्माण गर्ने टोलीका कार्यक्रम निर्माताहरूले ती किसानलाई आफूहरूको परिचय नभनी बुढीआमाको भूमिकाबारे प्रश्न सोधेछन्। आलीमा रेडियो राखेर कृषिकर्म गरिरहेका उनले ‘ती बुढीआमालाई भेट्न पाए म पैसाको माला लगाइदिन्थें’ भन्दै पशुपतिनाथसँग भेट जुराइदिन प्रार्थना गर्ने गरेको सुनाएछन्। त्यहीं छेउमा उभिएकी बुढीआमाले आफू नै यो कार्यक्रमको प्रास्तोता रहेको स्वरले प्रमाणित गरेपछि ती किसानले वाचा पूरा गरेछन्। ‘दुई रुपैयाँका १६/१७ नोटको माला बनाई लाइदिए, त्यो माला अहिले छैन, तर ती रुपैयाँ जतनले राखेकी छु,’ हालैको भेटमा भुसालले सुनाइन्।
रेडियो जीवनको करियर बनाएर निरन्तर यात्रा गरिरहेकी भुसाल अविवाहित हुन्। धेरैलाई उनी ‘फुर्सद नपाएरै बिहे गर्ने उमेर बितेको’ प्रतिक्रिया दिन्छिन्। खासमा व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनबारे उनी सकभर मिडियाले नसोधेकै जाती मान्छिन्। पारिवारिक पृष्ठभूमि र उनको निजी जीवन पछाडिका कथा/व्यथा उनी सार्वजनिक गर्न चाहँदिनन्। उनले आफ्नो जीवन यात्राबारे एउटा पुस्तक लेख्ने सोच बनाएकी छन्। लेखिए त्यो पुस्तकले धेरै प्रश्नको उत्तर देला। हालैको एउटा छोटो भेटमा उनले भनिन्, ‘त्यो जुगमा रेडियोमा छोरी मान्छेले बोल्नु राम्रो मानिँदैनथ्यो।’ उनका अनुसार त्यसबेला छोरी मान्छे कलाकारितामा आउनु बिग्रिनु सरह मानिँदो रहेछ।
‘भुन्टेकी आमा भात पाक्यो?’ भनी रेडियोमा उनका सहकर्मीले सोधेको प्रश्नमा ‘पाकेको छैन भुन्टेका बा π’ भनेको अभिनय संवादले जीवनलाई आजको एक्लो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको उनी ठान्छिन्। घरका मान्छेले ‘भुन्टेकी आमा’को स्वर रेडियोबाट सुनेपछि ‘यसले त रेडियोमा बिहे गरिसकेकी रहेछ’ भन्दै त्यसताका आफूमाथि घृणा गरिएको उनले सुनाइन्। उनलाई त्यसपछि घरपरिवारबाट ‘निकाला’ गरिएछ।
‘त्यसयता मैले २३/२४ ठाउँमा डेरा बसाएँ। अहिले जोरपाटी नयाँबस्तीमा पुगेकी छु,’ हाल भजन–कीर्तनसँग साइनो जोडेकी यी एक्लीले भनिन्, ‘अबको २/४ वर्ष रेडियोकै लागि काम गर्छु। त्यसपछि जे होला, होला।’
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०८:१८
श्रावण १४, २०७४ विमल निभा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यसुस्ततालाई लिएर अनेकन सवाल उठिरहेका छन्। यसको समयानुकूल जवाफ आउँदै–जाँदै गर्ला नै। अँ, यही सवाल/जवाफ बीचबाट मेरो भन्नु के हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सुस्त नभएर चुस्त भएका भए के हुन्थ्यो?
‘यो त बबाल सवाल भयो नि कविजी।’ मैले यही प्रश्न गुरुसमक्ष राख्दा उनले भने।
‘अब जे भए पनि यो एक सवाल त हो नि गुरु।’
‘त्यो त हो, तर यसको जवाफ म...।’ गुरुले अनकनाउँदै भने, ‘यो बबाल सवालको जवाफ मसँग छैन, कविजी।’
एक प्रकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसरी ज्यास्ती नै सुस्त भएर ठिकै भएको छ। केही गरी विलकुलै चुस्त भएका भए ठूलो बबाल दृश्यपटलमा उपस्थित हुने थियो। यसलाई एक समसामयिक उदाहरणसहित भन्ने हो भने उनले समयमा आफ्नो अध्यक्षता सहितको मन्त्रीमण्डलको विस्तार नगरेर के नराम्रो गरे? याद रहोस्, नेपाली कांग्रेस पार्टीका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा एक पटके प्रधानमन्त्री हुन्। उनी विभिन्न कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनको दोस्रो (अथवा तेस्रो) प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मन्त्रीहरूका संख्या झन्डै गोटा सय पुगिसकेको थियो। अहिले ठ्याक्कै गणना गरेर भन्न आएन मलाई। यही अस्सी–एकासीको अंकमा हुनुपर्छ। जम्माजम्मी पचासी हो कि? अब जे भए पनि यसलाई हेरेर हालको देउवा सुस्ततालाई ‘क्याबात’ भन्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने? मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने यसपालि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उसरी नै चुस्त भएका भए त गजबै हुन्थ्यो † याने देउवा मन्त्रीहरूका कुल संख्याले सिंगो सयकडा पार गर्न के बेर लाग्थ्यो !
‘कविजी, तिमीले फेरि बबाल कुरा गर्‍यौ।’ मलाई गुरुले भने, ‘हेर, अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रीमण्डल उति ठूलो छैन त !’
‘म पनि यही त भनिरहेको छु गुरु।’ मैले भनँें, ‘के यो सबै उनको चिरपरिचित सुस्तताको स्वाभाविक उपज होइन र?’
‘फेरि बबाल कुरा कविजी।’
‘यो बबाल कुरा होइन गुरु।’
यो चौथो पटकको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगावै अर्थात् अप्रधानमन्त्रीय बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पटक्कै सुस्त थिएनन्। यसको सोझो अर्थ के हो भने उनी चुस्त थिए। त्यो प्रशस्त चुस्तताको ठोस प्रमाणस्वरूप उनले प्रहरी डिपार्टमेन्टको ठूला–ठूला प्रहरी हाकिमहरूका आवश्यक–अनावश्यक सरुवा–बढुवामा देखाएको अतिरिक्त अभिरुचिलाई सहजै अघि सार्न सकिन्छ। यतिले पुगेन भने लोकतन्त्रको एक सबल खम्बा भनिएको न्यायालयमा उनको विलकुलै अस्वाभाविक ‘हातहरूलाई’ पनि उत्तिकै स्मरणीय रहेको छ। के तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको सरकारी पार्टनरसिपमा खुल्लमखुल्ला प्रदर्शित महाअभियोगरूपी शेरबहादुरीय ‘चुस्तता’लाई चटक्कै बिर्सन सकिन्छ? यही सन्दर्भमा मेरो एउटा अर्काे सवाल के हो भने त्यस बखतका सर्वाेच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ‘महाअभियोग’ किन लगाइएको हो? र यसको पुरक प्रश्न यस्तो पनि हुनसक्छ– ल, महाअभियोग त लगाइयो, लगाइयो, तत्पश्चात त्यसै–त्यसै अकारण फिर्ता किन लिइयो? सम्भवत: यो सबै उनको जबर्जस्त ‘चुस्तता’को फलस्वरूप भएको हो। होइन र? मलाई यस प्रकारको प्रधानमन्त्री हँुदा तथा नहुँदाको उनको समानप्राय: ‘चुस्तता’सँग असाध्यै डर लाग्छ। र यसको कारण के हो भने यो देउवा मार्का ‘चुस्तता’ दोहोरिएमा कतै सांसदहरूलाई बैंकक भगाइएको काण्ड, पजेरो किन्न माननीयहरूलाई भन्सार छुट दिएको काण्ड, सांसदहरूका तलब र भत्ता ह्वात्तै बढाइएको काण्ड आदि धारावाहिक महाकाण्डहरू पुन: शक्तिशाली भएर सतहमा आउने त होइन?’
‘कविजी, तिम्रो कुरा मिल्दै मिलेन नि !’
‘के मिलेन गुरु?’
‘तिमी अखबार–सखबार पढ्दैनौ?’
‘किन, के भयो गुरु?’
‘हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाले भर्खरै चुस्त भएर मन्त्रीहरू थपेका छन्।’ गुरुले भने, ‘तिमीलाई नयाँ कुरा केही थाहा छैन।’
‘त्यसो भए हाम्रा सुस्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुस्तता साँच्चिकै जागृत भएको हो त?’ मैले भनेँ, ‘यो त झन् बबाल भयो गुरु।’
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०८:१५